राजेशलाई करिश्माको चुनौति- काठमाडौंको मेयरमा उठ्नुस्
सोमबार राति अभिनेत्री तथा नेतृ करिश्मा मानन्धरको फेसबुकमा एउटा स्टाटस देखियो, ‘राजेश हमाललाई सुझाव– यदि हजुरलाई नेपाली समाज र देशको चिन्ता छ भने काठमाडौंबाट मेयरका लागि स्वतन्त्र चुनाव लड्नुस्। मेरो भोट तपाईंलाई हुनेछ।’
कुनै जमानाका यी ‘हिट जोडी’ को सम्बन्धमा केही उतारचढाव पो आएछ कि! यो करिश्माको सुझाव हो या चुनौति? कि व्यंग्य?
करिश्माले यो स्टाटस लेख्नुको कारण रहेछ, राजेशको फेसबुक स्टाटस।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा उनलाई स्वागत गर्न भारतका राज्यमन्त्री आएपछि सामाजिक सञ्जालमा नेपालको अपमान भएको भन्दै अनेक प्रतिक्रिया आए। अभिनेता राजेश हमाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनन्। उनले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल आउँदा विद्यादेवी भण्डारी स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेको तस्बिर र भण्डारी भारत पुग्दाको तस्बिर राखेर असन्तुष्टी पोखे।
राजेशको यो स्टाटसपछि करिश्मालाई खसखस भएछ। करिश्माले राजेशजस्तो व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल, कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक धारणा राखेर मात्र नपुग्ने भएकाले उनलाई यो चुनौति दिएको बताइन्।
‘मैले केही समयअघि नयाँ शक्तिका लागि उहाँसँग मिटिङ गरेको थिएँ,’ करिश्माले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘उहाँलाई नेपालको मात्र होइन, संसारकै राजनीतिको विगतदेखि वर्तमानसम्मका चित्र थाहा छन्। समाज र राजनीतिप्रति उहाँको बुझाईबाट म निकै प्रभावित हुँ। बुझ्दै नबुझेको मान्छे राजनीतिमा आइरहेको देख्छु। म पनि राजनीति धेरै बुझेको मान्छे होइन, सिक्दैछु। राजेशजीसँग मेरो आग्रह भनेकै यत्तिको समझ भएको मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्‍यो भन्ने हो।’
करिश्माले राजेशसँग नेपालको राजनीति झन्–झन् बिग्रन थालेको र सभ्य मानिसले त्यसलाई सङ्ल्याउनुपर्ने विचार राखेकी थिइन्। तब राजेशले भनेछन्, ‘हामी आउँदैमा सप्रन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी?’
तब करिश्माले भनिछन्, ‘हिजो तपाईं–हामीले फिल्म खेल्दा नेपाली फिल्मक्षेत्र यत्तिको बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी लिएर खेलेका हौं र? हामीले भविष्यको वास्ता नगरी काम ग¥यौं नि हैन?’
करिश्माको भनाइमा देश बनाउने भनेको राजनीतिले नै हो। यो कुरा राजेशलाई पनि राम्ररी थाहा भएको, राजनीति बुझेको, नेतृत्व क्षमता पनि भएको तर आफ्नो खुबीलाई प्रयोग नगरेकोमा करिश्माले खुल्ला रुपमा चुनौति दिएको बताइन्।
‘घरमा सुनको थुप्रो भएर मात्र मान्छे धनी हुँदैन, त्यसलाई प्रयोग पनि गर्न जान्नुपर्छ,’ करिश्माले भनिन्, ‘राजेशजीले पनि आफ्नो खुबी प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। ’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख ५, २०७४ ११:२५:५९